Hello Nepal News » किन नङ टोक्छन् मानिसहरू ? यस्तो छ कारण
किन नङ टोक्छन् मानिसहरू ? यस्तो छ कारण
दैनिक जीवनमा कतिपय मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ । नङ टोक्ने बानी खराब बानीमा पर्छ । नङ टोक्ने मानिसलाई फोहोरीसमेत भनिन्छ । अनुसन्धान तथा विभिन्न रिपोर्टहरूका अनुसार संसारमा लगभग ६० करोड मानिसको नङ टोक्ने बानी छ ।
यसरी नङ तोक्ने तथा चपाउने बानीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको १४ देखि २५ वर्षका युवा हुन्, जसमा ३४ प्रतिशत महिला र ६६ प्रतिशत पुरुषहरू पर्छन् । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिस तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, केही काम नहुँदा, अल्छी तथा बोर हुँदा अनायासै नङ टोक्न पुग्छन् ।
नङ चपाउनु गलत हो भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि केहीले यसलाई छाड्न सक्दैनन् । र, यो एउटा बानी नै बन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूले नङ टोक्नु गम्भीर बिरामीको संकेत भएको बताउँदै आएका छन् । नङ चपाउनु मानिसले मानसिक तनाव र ‘अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर’को संकेत दिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नङ टोक्नु व्यक्तित्वको अस्थिरताको संकेत हो । कुनै जटिल समस्याको समाधान निकाल्न नसक्दा, डर तथा रिस उतार्न समेत नङ टोक्ने गर्छन् । नङ टोक्ने मानिस आफ्नै सोचमा हराउने हुन्छन् । अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा भएका तथा आफूलाई बेकामे ठान्ने मानिसले नङ टोक्ने गर्छन् ।
अनुसन्धानले ९० प्रतिशत नङ टोक्ने मानिसले आफूभित्र हीन भावना पालिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाएको छ । साथै, नङ टोक्ने मानिसको मुखमा धेरै ब्याक्टेरिया हुने गर्छ, जुन नङबाट सरेको हुन्छ । जसले गर्दा हैंजा, पखालालगायत विभिन्न रोगहरू सर्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १९ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०२:३८